Abiyyi Ahimad - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 15:55 13 Amajjii 202215:55 13 Amajjii 2022
MM Abiy waraanatti xumura tolchuuf 'itti-gaafatama addaa qabu' – Koree Badhaasa Nobeelii
Badhaafamaa Noobelii Nagaa bara 2019 kan tahan Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad waraana waliinii Kaaba Itoophiyaa miidhaa jiru akka xumura itti tolchan Koreen Noobelii Noorway gaafate.
...tti maxxanfame 6:06 10 Amajjii 20226:06 10 Amajjii 2022
Murtiin hidhamtoota hiikuu 'dhugaa osoo hadhaa'uu liqimsinedha' - MM Abiy Ahimad
Mootummaan namoota dhimmisaanii mana murtiin ilaalamaa ture himata isaanii adda kutee mana hidhaatii gadi dhiisuun namoota hedduu kan mufachiisee fi garuummoo tarkaanfii fudhatamuu qabu akka ta'e MM Abiy Ahimad ibsan.
...tti maxxanfame 12:01 9 Amajjii 202212:01 9 Amajjii 2022
Raayyaan Itoophiyaa Maqaleedhaa bahuu 'waan nuti hin eegne ture' - Pirezidant Isaayyaas
Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa xumura baatii Waxabajjii waggaa darbeetti bakkeewwn Tigraay garagaraa keessaa bahuun isaa ''kan hin eegneefi tasa waan ta'edha,'' jedhan Pirezidantiin Ertiraa Isaayyaas Afawarqiin. Dhimmoota garagaraa irratti gaafa Sambataa Televijinii Ertiraa waliin turtii taasisaniiru.
...tti maxxanfame 16:02 7 Amajjii 202216:02 7 Amajjii 2022
MM Abiy Ahimad rakkoo sirna haqaa keessa jiru cimsanii qeeqan
Ministirri mummee Abiy Ahimad guyyoota laman darbanitti marii kaabinee isaanii waliin taasisaniin sirna haqaa cimsanii qeeqan.
...tti maxxanfame 4:20 7 Amajjii 20224:20 7 Amajjii 2022
'Araarri, nagaan biyyaalessaa nu barbaachisa' - MM Abiy Ahimad
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad araarri nagaa biyyaalessaa nu barbaachisaa jechuun himan. MM Abiy ergaa Ayyaana Qillee yookiin Dhaloota Gooftaa Iyyasuus Kiristoos sababeeffachuun ergaa dabarsaniini.
...tti maxxanfame 8:49 27 Muddee 20218:49 27 Muddee 2021
MM Abiy diyaaspooraa Itoophiyaa jajuun yeroo biyya galan waan gochuu qaban dhaaman
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad diyaaspooraan Itoophiyaa ''dippiloomatii gaheeyyii ta'uun biyya isaanii kabachiisaniiru'' jedhaanii kanneen duula 'Great Ethiopian Home Coming' biyyattii dhufaa jiran waan hojjechuu qaban dhaaman.
...tti maxxanfame 4:03 15 Muddee 20214:03 15 Muddee 2021
MM Abiy akkamiin waraanaan finciltoota of duuba deebisuutti milkaa'an?
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad finciltoota Tigraay aangoorraa isaan gugsuuf yaaddessan loluuf adda waraanaatti duuluun yaadannoo mootiiwwan duranii irra deebiin dammaqsanii jiru.
...tti maxxanfame 4:27 13 Muddee 20214:27 13 Muddee 2021
Magaalaan Laaliibalaa deebitee harka finciltootaa galuun gabaafame
Humnootiin TPLF wayita humnoonni mootummaa federaalaa adda garaagaraatiin cimee waraanaa eegalee guyyoota 11 dura Laalliibalaa gadhiisanii bahanii turan.Har'a ammoo deebiisanii to'achuun gabaafame.
...tti maxxanfame 17:17 8 Muddee 202117:17 8 Muddee 2021
MM Abiy adda waraanaatii akkuma deebiyaniin bulchitoota biyyoota ollaa waliin mari'achuu himan
Ministirri Muummee Abiy Ahimad guyyaa Roobii dirree waraanaatii waraana kallattiin taliiguurraa deebi'uu erga ibsanii booda bulchitoota biyyoota Baha Afrikaa jaha waliin mari'achuu himan.
...tti maxxanfame 4:17 8 Muddee 20214:17 8 Muddee 2021
Mootummaan addatti labsii dhukaasa dhaabuu labsuun Tigraay keessaa bahu hordofee lolli Tigraayitti eegalee gara Afaariifi Amaaraa babal’ateera. Baatiiwwan muraasa keessas finciltoonni Waldayaa, Laalibalaafi bakkeewwan murteessoo kaan to’atan. Eegasiis imala gara Finfinnee taasisan humni dhaabsisu akka hin jirre yeroo ibsan dhagahameera. Torbee dhihoo asitti kuni waan jijjiirame fakkaata. Itti aanee maal uumamuu danda’a?
Page 1 Keessaa 17